Macallinka cusub ee Tottenham Jose Mourinho oo shaaca ka qaaday inuu taageere u yahay xiddig bartilmaameed u ah Man United – Gool FM
(London) 21 Nof 2019. Macallinka cusub ee Tottenham Jose Mourinho ayaa shaaca ka qaaday inuu taageere weyn u yahay ciyaaryahan bartilmaameed u ah Kooxaha Spurs iyo Man United.
Jariiradda Mirror ayaa warinaysa in macallin Jose Mourinho uu taageere xoog leh u hayo Bruno Fernandes kaasoo sidoo kale si xoog leh loola xiriirinayey inuu u dhaqaaqo Spurs suuqii xagaaga.
Tottenham ayaa u muuqata mid dagaal toos ah oo ku aaddan adeegga Fernandes la gali doonta Manchester United, laakiin waxa uu ku sii sugnaaday Sporting, halkaasoo uu nafsaddiisa ka yeelay mid ka mid ah kuwa khadka dhexe ee ugu fiican Yurub.
Xiddiga xulka qaranka Portugal ayaa dhaliyey 31 gool kaliya 52 kulan oo uu saftay xilli ciyaareedkii la soo dhaafay, waxaana uu haatan dhaliyey siddeed gool 14 kulan oo uu ciyaaray xilli ciyaareedkan.
Waxa uu qarka u saaran yahay inuu weli aado kooxaha xiiseynaya marka uu furmo suuqa kala iibsiga bisha Janaayo, macallin Mourinho ayaana ka hadlay sida uu u jecel yahay 25-sano jirkaan.
“Waxaan la yaabay xilli ciyaareedkii Bruno Fernandes,” ayuu Mourinho u sheegay Eleven Sports.
“Waa ay fududahay in la saadaaliyo tayada, waa ciyaaryahan aad u wanaagsan, laakiin wuxuu dhaliyay goolal aad u sarreeya isagoo ah ciyaaryahan khadka dhexe ah.
“Waxay muujineysaa inaad u baahan tahay inaad lahaato dareen iyo tayo si aad wax u dhaliso isagana waa uu leeyahay middaa.
“Wuxuu si fiican u garaacaa kubbada, si fiican ayuu madaxda ugu fiican yahay, wuu isdajiyaa ama qaboobaa marka uu hal iyo hal la joogo goolhayaha, wuxuu boos ka helaa xerada ganaaxa.”
Mourinho ayaa heshiis saddex sanadood iyo bar ah qalinka ugu duugay kooxda ka dhisan Waqooyiga London kaddib markii ay Spurs Habeenkii Arbacada iska cayrisay tababaraheedii Mauricio Pochettino.
Mourinho waa shaqadiisii ugu horreysay ee macallinimo tan iyo markii shaqada kooxda Manchester United laga cayriyay bishii December ee la soo dhaafay.